UPDATE: Puntland oo ka hor-timid hadalkii guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Qaranka – HalQaran.com
UPDATE: Puntland oo ka hor-timid hadalkii guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Qaranka
by HalQaran Staff	 March 22, 2020 13 Views
Garowe (Halqaran.com) – Puntland ayaa ka soo horjeestay hadalkii Axaddii maanta kasoo yeeray guddiga doorashooyinka Qaranka ee lagu taageeray Sharciga doorashooyinka Qaranka oo ay labada Aqal horey u ansixiyeen, sidoo kale Madaxweyne Farmaajo uu saxiixey.
Qoraal kooban oo kasoo baxey Madaxtooyada Puntland ayaa waxaa lagu sheegay in hadalka guddoomiyaha guddiga doorashooyinka uusan aheyn hadal lagu taageerayo Sharciga doorashooyinka ee horey loo ansixiyey, balse uu yahay mid lagu joojinayo dadaalada ay Puntland wado.
“Guddiga Doorashada DF Soomaaliya hadalka ay hadda soo jeediyeen ma aha mid sharci waa-hore la ansixiyey lagu taageerayo, ee waxaan u arkaa mid looga hordhacayo dadaalada ay Puntland wado, laguna fashilinayo gogosha wadahadal ee Garoowe la dhigay, waana talaabo labaad oo jid-gooyo ah, marka laga soo tago war-saxaafadeedkii ay Wasiiradu qabteen ayaa lagu yiri” warka ka soo baxay Puntland.
Geesta kale, Siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa kamid ah Siyaasiyiinta kasoo horjeestey hadalkii guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka ee maanta ku sheegtay inay taageersan tahay ansixintii sharciga doorashooyinka.
#Puntland oo ka hor-timid hadalkii guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Qaranka
Previous Post Somali poll agency lauds parliament for approving election laws
Next Post Gabar safar aheyd oo lagu kufsaday Warsheekh iyo raggii falkaasi geystay oo la qabtay